सरकार र नागरिकको लापरबाहीले डेढ महिनामै कसरी तहसनहस बन्यो स्पेन ?
काठमाण्डौ । चीनपछि यूरोप कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बनेको छ । यूरोपमा इटलीपछि स्पेनमा गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । रोयटर्सका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म स्पेनमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या २२०६ पुगिसकेको छ । सोमबार आधा दिनसम्ममा मात्रै यहाँ ४३४ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । स्पेनमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको...
भोलिदेखि अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने बाहेकका सबै उद्योग बन्द हुने(८ निर्णयसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले मंगलबारदेखि देशैभर पूर्ण लकडाउनको निर्णय गरेको छ । काठमाण्डौमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित एक युवती फेला परेसँगै बाँकी क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलन नदिन सरकारले कडा कदम चालेको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ८ वटा...
भोलिदेखि देशमा पूर्ण लकडाउनः घरबाट बाहिर निस्किन नपाइने, गाडी र विमान नचल्ने
काठमाण्डौ । भोलिदेखि नेपाल पूर्ण रुपमा लकडाउनमा जाने भएको छ । भोलि बिहान ६ बजेदेखि लकडाउन सुरु गर्ने निर्णय भएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भोलिबाट एकसातासम्म घरबाट बाहिर निस्किन समेत रोक लगाइएको छ । देशभर कुनै पनि सवारी साधन पनि चल्ने छैनन् ।...
काठमाण्डौ । भोलिदेखि नेपालका सरकारी कार्यालय समेत बन्द गर्ने तयारी थालिएको छ । सोमबारसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु खुल्लै रहेका छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा हाजिर हुन उर्दी जारी गरेपछि ती कार्यालय खुल्लै रहेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुरुप अब अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेकका...
कोभिड १९: तपाईको ‘अशिष्ट’ व्यवहारले बच्नसक्छ लाखौंको ज्यान
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसले यतिखेर पूरै मानव जातिमा रहेको मानवताको परीक्षा लिइरहेको छ । मानव जातिकै अस्तित्वलाई चुुनौति दिइरहेको यो भाइरसले मानिसको स्वभाविक गतिबिधिलाई नै आफ्नो प्रमुुख हतियार बनाएको छ । कोरोनाले गर्दा अब मानव जातिले आफ्नो दिनचर्या र बानीव्यहोरामा परिवर्तन ल्याउनुुपर्ने देखिएको छ । हामीले आफ्नो आचरणलाई यो...
संक्रमित युवतीसँगै यात्रा गर्ने, आफन्त र साथीभाई खोज्दै सरकार, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने
काठमाण्डौ । कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएसँगै फ्रान्सबाट नेपाल आएकी १९ वर्षीय युवती सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको सरकारले खोजी सुरु गरेको छ । फ्रान्समा अध्ययनरत ती नेपाली युवती चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै काठमाण्डौ आएकी थिइन् । उनी काठमाण्डौ आउने क्रममा बिमानमा उनीसँगै यात्रा गर्नेहरुको समेत खोजी थालिएको स्वास्थ्यमन्त्री...
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चमात्कार गरेका यी देश, नेपालले सिक्नुपर्ने ६ पाठ
काठमाण्डौ । पश्चिमा देशहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । नेपालसँग खुल्ला सीमा जोडिएको भारतमा समेत यो भाइरसको संक्रमणबाट ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भारतले यसलाई फैलिन नदिन कडा कदम चालेको छ । नेपालले समेत संभावित संक्रमणको जोखिम रोक्न चीन र भारतका सबै सीमा नाका बन्द गर्ने, अन्तराष्टिय उडान ठप्प पार्ने,...
इटलीपछि स्पेनको अवस्था पनि भयावह, इटलीमा ६५१ नयाँ मृतक थपिँदा स्पेनमा ३७५ को मृत्यु
काठमाण्डौ । कोभिड १९ को संक्रमण महामारीको रुपमा फैलिएको इटालीको अवस्था झनै दर्दनाक बनेको छ । त्यहाँ मार्च २२ मा मात्रै थप ६५१ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ताजा रिपोर्टअनुसार इटलीमा हालसम्म कोभिड १९ संक्रमणका कारण मर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेर ५ हजार ४ सय ७६ पुगेको छ । इटलीमा एकैदिन कोरोना संक्रमणका ५ हजार...
भोलिदेखि एकसाताका लागि भारत र चीनतर्फका सबै नाका बन्द हुने
काठमाण्डौ । सरकारले भोलिदेखि एकसाताका लागि भारत र चीनसँगका सबै सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । भर्खरै सकिएको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जोखिमलाई रोक्नका लागि भोलि(सोमबार)देखि एकसातासम्म भारत र चीनका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले भारतसँगको सीमा नाकालाई केही सीमित गर्ने काम गरेको थियो ।...
वीरगञ्जका एक व्यापारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पटनामा उपचार हुँदै
काठमाण्डौ । वीरगञ्जका एक प्रतिष्ठित व्यापारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । केही दिनअघिदेखि निरन्त रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि उनलाई थप उपचारका लागि परिवारले बिहारको राजधानी पटना लगेका थिए । त्यहाँ चेकजाँच गर्दा उनमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति...
बैंकहरुले घरबाटै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सकेसम्म न्यून कर्मचारी खटाउन निर्देशन
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकेसम्म न्यून कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न र घरबाटै काममा खटाउने वातावरण बनाउन राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आइतबार एक सूचना जारी गर्दै यथासम्भव न्यून...
सीमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी बजार खुलाउन लागिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुको आपत्ति
काठमाण्डौ । लगानीकर्ताका संघसंगठनहरुले आइतबारदेखि नेप्सेले सीमित अनलाइन कारोबारीलाई लाभ पुग्ने गरी बजार खुलाउन लागेको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । केहीबेरअघि लगानीकर्ताका ५ वटा संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सरकारी घोषणा र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत...
भारतबाट आएका हजारौंको स्वास्थ्य जाँचमा लापरबाही भएको सरकारको स्वीकारोक्ति, ‘अब यस्तो हुँदैन’
काठमाण्डौ । सरकारले भारतसँगको खुल्ला सीमाबाट दैनिक हजारौं व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरिरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना रोकथामका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतबाट नेपालीहरु भित्रिए पनि...